ATTO na AVID: Akwụkwọ nkwado maka Over 20 Years - NAB Gosi Akụkọ site na Mgbasa Mgbasaozi. Onye mgbasa ozi mgbasa ozi nke NAB Show, Onye NAB gosiri LIVE
Home » Apụta » ATTO na AVID: Akwụkwọ nkwado maka Over 20 Years
ATTO Technology, Inc, mara ọkwa na ha ThunderLink® 40GbE na 10GbE ThunderboltTM A na-akwado ndenye 3 na 40GbE FastFrameTM Network Interface Cards (NICs) maka iji ya mee ihe uchuNEXIS® na-emekọrịta ihe ngwọta nchekwa.
"Ndị na-arụ ọrụ na ThunderLink na Network Network Interface dị mma iji nye 40GbE ọhụrụ na 10GbE connectivity ka ọ bụrụ uchu NEXIS na uchu OZI | Ihe ngwọta nchekwa nchekwa, " kwuru, sị Ed Harper, Onye Ọkachamara Manager na uchu Technology. "Site na asambodo a, ndị na-emepụta ọdịnaya na-arụ ọrụ na macOS®, Windows na Linux gburugburu na-emesi obi ike na a ga-anwale ma kwadoro ya, nhọrọ ga-arụ ọrụ dị elu iji mee ka ihe nchịkwa data dị ukwuu nke ọrụ mgbasa ozi na-arụ ọrụ."
Asambodo nke nyocha kpamkpam na akwado 40GbE na 10GbE ngwọta, bụ ogologo oge nke mmekọrita nke ọma n'etiti ATTO na uchu na-agbasapụ afọ 20. Mmekọrịta nke nyeere ndị ọkachamara ntụrụndụ aka ịrụ ọrụ ngwa ngwa, ka mma, na inwe obi ike usoro. ATTE Igwe Nlekọta ThunderLink na NICs Ngwa Ngwa na-enye nhọrọ dị mma maka njikọta maka ndị ọrụ na-achọ nchekwa data maka vidio arụkọtara, tinyere ọrụ 4K na 8K arụmọrụ dị elu. ATT 40GbE na 10GbE Thunderbolt 3 nkwụnye jikọtara atụmatụ ATTO nke nwere ike ịmepụta njikọta na nke kachasị mma maka Thunderbolt kachasị ọhụrụ, tinyere Apple iMac® na iMac ProTM. ATM 40GbE NICs gbasaa ohere ikwekọrịta na-enye ndị ọrụ Windows® na Linux® ọrụ iji nweta ezigbo mmepụta nke ezigbo oge nchịkọta akụkọ.
"Nchikota nke uchu nchekwa nchekwa na ATTO Ethernet Thunderbolt adapters na Network Interface Cards na-ekwe ka ndị ahịa na-ejikarị arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-edezi gburugburu, " kwuru, sị: Tom Kolniak, bụ onye isi nchịkwa ahịa na ATTO Technology. "Dị ka ọrụ nrịba dị iche iche na-eme iji nata mkpebi elu na ọnụ ọgụgụ dị elu, ndị ọrụ ga-achọ ọkwa ọhụrụ a nke ngwọta."
Jide n'aka ileta ATTO Technology, Inc. na #IBC2018 Ụlọ ndozi 7.A26. uchu at #IBC2018 ụlọ ndozi 7.B55
Maka afọ 30, ATTO Technology, Inc. abụwo onye isi ụwa na-elekọta IT na mgbasa ozi & ahịa ntụrụndụ, ọkachamara na nchekwa na njikọ netwọk na ngwọta akụrụngwa maka ebe kachasị njikwa kọntaktị data. ATTO na ndị mmekọ na-arụ ọrụ iji nyefee ngwọta njedebe na ụlọ ahịa dị mma, jikwaa ma nyefee data. Na-arụ ọrụ dị ka mgbakwunye nke ìgwè ndị na-emepụta ndị ahịa, ndị na-ahụ maka ndị ọrụ ATTO na ndị RAID, ndị na-ahụ maka netwọk, ndị na-elekọta nchekwa, ndị na-arụ ọrụ ThunderboltTM, na ngwanrọ. Nchọpụta ATTO na-enye ọkwa dị elu nke njikọta niile na nchekwa, gụnyere fiber Channel, SAS, SATA, iSCSI, Ethernet, NVMe na Thunderbolt. ATTO bụ Ike na-echekwa Nchekwa.
Akụkọ mgbe niile gbasara ndị mmadu. Akụkọ gbasara anyị. Ha na-agwa anyị. Ha na-akọwa anyị. Ogologo oge enwere ndị mmadụ, a ga-enwe akụkọ. Ogologo oge enwere echiche iji kesaa, a ga-enwe ndị na-ede akụkọ. Na uchu anyị na-enyere ndị mmepụta aka ịkọ akụkọ ha. Ndị kasị ege ntị na nke kachasị anya, na ndị a kacha hụ n'anya n'ụwa. Ebe ọ bụ na-eduga mgbanwe na ntinye ederede na 25 afọ gara aga, uchu nọgidere na-etinye ego na nnyocha na mmepe ma na-ejide 200 patent. uchu A matawo ngwọta site n'ọtụtụ ụlọ ọrụ na nkà na ụzụ, gụnyere Oscars® abụọ, Grammy®, na 15 Emmys®.
uchu SoftAtHome, MStar, CES2017 Ụgha & Akụrụ	2018-09-14
Previous: Echiche Blackmagic mara ọkwa ọhụrụ blackmagic RAW Codec
Osote: Onye Ọkachamara Mgbasa Ozi, GG-0301-11 / 12, Census-EXT-KTE
Hey Buddy !, Achọpụtara m ozi a maka gị: "ATTO na AVID: Akwụkwọ Ọrụ Akwụkwọ maka Over 20 Years". Nke a bụ njikọ weebụsaịtị: https://www.broadcastbeat.com/atto-and-avid-certified-collaborations-for-over-20-years/. Daalụ.